Home News maxaa kasoo kordhay qaraxyadii Magaalada Gaalkacyo
maxaa kasoo kordhay qaraxyadii Magaalada Gaalkacyo
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qaraxyo Saakay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Labo Qarax oo waa weyn ayaa ka dhacay xarunta wadada Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi yare oo ku taalla Koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Qaraxyadda ka dib dabley hubeysan ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen xarunta halkaasna ay ku laayeen dadkii ku sugnaa.
Dad badan oo isugu jira Shacab iyo xertii wadaadka ayaa la xaqiijiyay in ay halkaasi ku dhinteen, waxaana ugu dambeyntii weerarkaasi soo Afjaray Ciidanka Galmudug.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Qaraxyaddaasi lagu dilay Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi.
Previous articleCiidamada Maamulka Galmudug iyo Koox hubeysan oo dagaal xoog leh uu ku dhex marayo Magaalada Gaalkacyo
Next articleUrurka Al Shabaab oo sheegatay qaraxyadii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Gudoomiye Yariisoow oo la weeydiiyay Su’aal argagax gelisay’’Facebook Lacag kuma Bixiyo...
Villa Soomaalia oo Weji jabax kala kulantay Ahlusunna Iyo Khilaafka oo...